MANAKAIKY NY 2018 : Mandeha sahady ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana | NewsMada
Efa tena fampielezan-kevitra ny zavatra tahaka izao.
Raha toa ka mbola amin’ny taona 2018 ny fifidianana izay ho filoha faharoa hitondra ny repoblika fahefatra eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao, efa mandeha sahady ny fampielezan-kevitra ataon’ny antoko sasany, sy ny fitondrana. Hazakazaka mialohan’ny fotoana…
Misy tsy mahandry tantana… Araka ny lalàna manan-kery eto, ny eo anivon’ny Fitsarana avo no mamoaka ny fotoana hanombohan’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, saingy tsy misy mahandry izany intsony. Efa mandeha amin’izao fotoana ny karazana fampielezan-kevitra ataon’ireo olona mikasa hilatsaka amin’izany fifidianana izany. Tsy ambakan’io ihany koa ny eo anivon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao. Pimaso tsy misy mihoatra ireny natao tetsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nizarana vary ho an’ireo mahantra ireny. Toa manitikitika ny saina foana ny fanontaniana hoe : « Angaha moa misy mahantra indray eto ? ». Raha tsiahivina ihany koa, kamiao mihitsy no nitaterana ireo mponina tamin’ny faritra manodidina an’Antsiranana tamin’ny fidinan’ny filoha tany an-toerana, volana vitsivitsy lasa izay. Tsy miasa irery, vao tsy ela ihany koa izay, ny vadin’ny filoha indray no nanatitra fitaovana ho an’ireo voafonja. Pimaso tsy misy mihoatra izany.
Tsy izy irery…
Efa hiditra ny enim-bolana faharoan’ny taona 2017, na izany aza anefa, mbola tsy fotoan’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’izao fotoana izao. Ny fiandohan’ny herinandro teo, tany amin’ny faritra Antalaha ny filoha teo aloha Ravalomanana , nanao izany karazana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana izany ihany. Nanambitamby sy nampanantena ny vahoaka tany an-toerana, izay efa tena miendrika fampielezan-kevitra mihitsy. Raha hiverenana, tsy voafaritra ao anatin’ny lalàna mifehy ny fifidianana ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana tahaka izao. Hanairana ny sain’ny mpanao lalàna ny famaritana izany. Raha tsiahivina ihany koa, efa nentin’ireo mpisehatra tamin’ny fififidianana tamin’ny fakan-kevitra nataon’ny teo anivon’ny vaomiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana ny momba io resaka io saingy toa tsy misy tohiny hatramin’izao.